2010 November | MoeMaKa Burmese News & Media
>Suu met with Burmese political prisoners’ families and former prisoners
> ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများ၊ မိသားစုများနဲ့ တွေ့ဆုံ တာရာဝေယံ။ ဓာတ်ပုံသတင်း ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၀ မြန်မာဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့ မနက် ၁၁...
>Tu Maung Nyo – Don’t be Fooled by the Regime’s old tricks
> စစ်အာဏာရှင်လှည့်ကွက်ထဲ ၀ဲဂယက်ချာလည်လည် မဖြစ်စေလိုပါ တူမောင်ညို ၃၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၀ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်လာတဲ့ နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက် နောက်ပိုင်း ဖြစ်စဉ်များအပေါ် (နအဖ) စစ်အစိုးရ တုန့် ပြန်မှုတွေဟာ...
>Milkwalkie Burmese Monastery host Kahtina Pwe
> မီဝေါကီးမြို့ ၊ပညာရာမကျောင်းတိုက် ဘုံကထိန်ပွဲတော် ကျင်းပ မိုးမခအထောက်တော် မီဝေါကီး နိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၀ ဝစ္စကွန်စင်ပြည်နယ်၊မီဝေါကီးမြို့၊ ပညာရာမကျောင်းတိုက်ဝယ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့ တွင် ကထိန်သင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ ဘုံကထိန်ပွဲတော်ကို ဗုဒ္မဘာသာနွယ်ဝင်၊...
>30th Nov 2010 – Journal Headlines Digests
> နိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၀ – ပြည်တွင်းဂျာနယ်ဒိုင်ဂျက် ဂျာနယ်ဂြိုဟ်သာဂိ နိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၀ အင်န်ဒီအက်ဖ် ပြိုကွဲပြီလော၊ ဦးခင်မောင်ဆွေ၊ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းနဲ့ ဦးသိန်းညွန့် အပြောများ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးစာပေဈေးကွက် ပျက်ပြန်ပြီ မန္တလေးအိမ်တော်ရာ...
>Takraw teams saved Bumra
> ပိုက်ကျော်ခြင်းကြောင့် မြန်မာတို့ လက်မ ထောင်နိုင်ခဲ့မိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ၀၁၀နိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၀ ပျော်ရွှင်နေသည့် ဖြူဖြူသန်း၊ မေဇင်ဖြိုး၊ ကြူကြူသင်း (photos: Getty Images) အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲနောက်ဆုံးနေ့ စနေနေ့က ပိုက်ကျော်ခြင်း...
> နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၀ – မိုးမခရေဒီယို သံယောဇဉ်နဲ့ ဆန်ရေ – မာမာအေး၊ ရန်အောင်၊ (စုနဲ့ Kim အတွက်) သတင်းတိုထွာ၊ သီချင်းပဒေသာ ရှေ့ခြေလှမ်းအတွက် ညီညွတ်ကြ –...
> မြန်မာပြည်က ဝေဒနာရှင်တွေအတွက် ဝါရှင်တန်ဒီစီ မြန်မာလူငယ်ကလေးများရဲ့  Red Ribbon လှုပ်ရှားလှုံ့ဆော်မှု ဇာဝါရီ (မယ်ရီလန်း) နိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၀ ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ လည် လူစည်းကားရာနေရာတခုဖြစ်တဲ့ Dupont Circle...
>Mar Mar Aye – 356
> “ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီး ရှိသေးတယ်” အမှတ် (၃၅၆) ဓနုဖြူ စိုးသိန်း ၀န်းကျင်မာမာအေးနိုဝင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၀ သောတရှင်များ...
>Letters from Michigan – 37
> မစ်ရှီဂန်မှပေးသောစာ အမှတ် ၃၇အောင်ဝေးနိုဝင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၀ မိတ်ဆွေကြီးကိုဒေါင်း- ကျန်းခံ့သာလို့ မာပါစ။ ပြည်တွင်းကကြားရတဲ့ သတင်းတွေအပေါ် အခြေခံပြီး ကျနော် တွေးထင်မိတာလေး တချို့ကို ဆက်ပြောပရစေ။ သတင်းက မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ...
>Suu & People – Q & A
> “လူထုနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်” လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံမှ စီစဉ်တင်ဆက်သော အပတ်စဉ် အမေး အဖြေ အစီအစဉ် (နိုဝင်ဘာ ၂၆ရက်၊ ၂၀၁၀) နိုဝင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၀ မေးခွန်းမေးသူ။ ။ အရှင်ပညာနန္ဒ (နယူးယောက်ပြည်နယ်၊...
>Moemaka Quotes for Nov 2010
> မိုးမခ၏ နိုဝင်ဘာလ စာကိုး၊ စကားကိုးနိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၀ သည်းခံခွင့်လွှတ်ခြင်းအားဖြင့် အမှား နည်းပါတယ်။ အဓိက ကတော့ မေတ္တာတရားနဲ့ပဲ အနိုင်ယူတာ ကောင်းပါတယ်။ ဘုရားသခင်တောင် မေတ္တာတရားနဲ့ အနိုင်ယူခဲ့တာပဲ။ ကျွန်တော်...
>Artists visited shelter for people living with HIV
> ကဗျာ၊ ဂီတ၊ ပန်းချီ လောကသားများ မဖြူဖြူသင်း၏ လူနာများထံ သွားရောက် အားပေး ဓာတ်ပုံသတင်းနိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၀http://www.demowaiyan.co.cc/2010/11/hiv_29.htmlသွားရောက် အားပေးခဲ့ကြတဲ့ ကဗျာဆရာ၊ သီချင်းရေးဆရာ၊ ပန်းချီဆရာများ ဂေဟာတွင် အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံ...
>changing photos of suspected bomber
> အင်တာနက်ဆိုင် ဗုံးအတွက် တခြား ၂ ဦးကို ပြောင်းလဲ သံသယဖြစ် မိုးမခအထောက်တော်၊ ရန်ကုန်နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၀ ယခင်ထုတ်ပြန်မှု နှင့် ယခု ပြင်ဆင် ထုတ်ပြန်သည့်ပုံ ရန်ကုန် မြို့တော်ခန်းမ...
> ရန်ကုန်မှာ ဆွဲပြီခင်နှင်းလွင်၊ ရန်ကုန်နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၀ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ရန်ကုန်ရှိ သာကေတမြို့နယ်ရှိ ရပ်ကွက် တချို့တွင် အရပ်သား အများအပြား အဖမ်းခံနေရကြောင်း ဒေသခံ လူတစ်ဦးက ပြောသည်။ ည ၁၁...
>Health Effects of Burning Trash in Maulmein
> အမှိုက် မသိမ်းဘဲ နေ့စဉ်မီးရှို့ခြင်းကြောင့် မော်လမြိုင်သားတို့ ကျန်းမာရေးထိခိုက်မိုးမခ အထောက်တော်၊ မော်လမြိုင်နိုဝင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၀ လှပတဲ့ မော်လမြိုင်မြို့ တနေရာ (ဓာတ်ပုံ-မိုးမခ) မော်လမြိုင်မြို့စည်ပင်သာယာ အဖွဲ့က နေ့စဉ်ထွက်ရှိတဲ့ အမှိုက်များကို သိမ်းဆည်းခြင်းမပြုဘဲ...
>min ko naing in prison
>မင်းကိုနိုင် ထောင်ထဲမှာ နေသည်။ ဒီမှာနေ၊ ဒီမှာအိပ်၊ ဒီမှာထိုင်၊ ဒီမှာလမ်းလျှောက်၊ ဒီမှာသောက်၊ ဒီမှာစား၊ ဒီမှာ ပါ၊ ဒီမှာ ပေါက်။တိုက်ပြောင်း ထောင်ပြောင်းလာခေါ်လျှင် လိုက်သွားရပြန်သည်။ လူဆိုတာ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်နှင့် သူများစိတ်နှင့် နေရတာလောက်...
>Fort Wayne Burmese honors Suu Freedom with reciting poems
> အမေရိကန်ပြည်၊ ဖို့ဝိန်းက မာရသွန်နှင်းဆီ ကဗျာရွတ်ဆိုပွဲဖြင့် ဒေါ်စုလွတ်မြောက်မှုကို ဂုဏ်ပြု မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂၊ ဓာတ်ပုံ ခင်မောင်လေး နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၀ လွန်ခဲ့သည် နိုဝင်ဘာ ၂၅၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ၏...
> နယူးယောက်ပြည်နယ်တ၀ှမ်းက မြန်မာမိတ်ဆွေများက မြန်မာပြည်တွင်းရှိ HIV- AIDS ဝေဒနာရှင်များအတွက် စုပေါင်းရန်ပုံငွေ ဈေးရောင်းကြမည် မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂ နိုဝင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၀ လာမည့် ဒီဇင်ဘာ ၅ တနင်္ဂနွေနေ့တွင်...
>treasure of my life, poems from my heart – 01
> ဘ၀ထဲက ရတနာ၊ ရင်ထဲက ကဗျာ (၁)တင်မိုးနိုဝင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၀ “ဧည့်သည်ကြီး” ဆေးလိပ်လည်းတိုနေလည်းညိုပြီငါ့ကို ပြန်ပို့ကြပါလေ။ ဒီကဗျာလေးကိုတော့ မှတ်မိကြတဲ့သူ တော်တော်လေးများတယ်။ စိတ်လဲ ၀င်စားကြတယ်။ ကဗျာရဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဘာလဲလို့...
>Kyaw Thu – FFSS Yangon Activity (27th November 2010)
> နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)၏ သတင်းမှတ်စု လှုပ်ရှားမှုများ ကျော်သူနိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၀ တိုင်းရင်းသား ပရဟိတ မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်များ ၂၇. ၁၁. ၂၀၁၀ (စနေနေ့) နံနက် ၁၀း၃၀ နာရီအချိန်တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း...